I-trapiche i-sapphire-iphethini ye-radial ebonakalayo ye-radi-like-video
Thenga isafire yendalo kwivenkile yethu
I-trapiche isafire iyintlobo engabonakaliyo yeritye eligugu, elibhekiselele kumzekelo we-radial ephawulweyo we-radi-like spokes of impurities. Ngenye yeendidi ezininzi zeetrapiche okanye i-trapiche-like minerals, ezibandakanya i-trapiche ruby, i-emerald, i-garnet, i-chiastolite kunye ne-tourmaline. Igama livela kwi-trapiche yegama leSpeyin, i-sugar mill, ngenxa yokufana kweprojekthi yezithethi zesondo.
Umzekelo we-radial ubonisa ukuhlukahluka okukhulu, kwaye ngokuqhelekileyo kubandakanya isakhiwo se-hexagonal engundoqo. Akukho mvumelwano malunga nendlela esebenzisa ngayo ifomathi, okanye iimeko ezifunekayo. Imizekelo eyahlukeneyo iye yacetyiswa.
Isapire yendalo isafire lilitye elinqabileyo, iintlobo ezahlukeneyo ze-corundum yamaminerali, i-aluminium oxide (α-Al2O3). Luhlobo oluhlaza okwesibhakabhaka, kodwa amatye anqabileyo endalo ayenzeka etyheli, ezimfusa, eorenji nakombala oluhlaza, isafire yamabala ibonisa imibala emibini okanye ngaphezulu. Umbala kuphela ongenakubomvu. Njengombala obomvu we-corundum yiruby, enye into eyahlukileyo ye-corundum. Olu hlobo lombala lubangelwa kukulandela umkhondo wezinto ezinje nge-iron, titanium, chromium, ubhedu, okanye i-magnesium.
Ngokwesiqhelo, sisika kwaye sigqogqa ipayishe yendalo yeesarha ezinqabileyo njengamatye anqabileyo kwaye siyambatha ubucwebe. Ziyakwazi nokuba zii-synthetics zecandelo lezemizi-mveliso okanye zokuhombisa kwiindawo ezinkulu zekristale. Ngenxa yobunzima obumangalisayo: I-9 kwisikali seMohs. Okwesibini okunzima ukumbiwa, emva kwedayimane ngo-10. Sisebenzisa kwezinye izinto ezingezizo zomhlobiso. Ezifana nezinto ze-infrared macho. Iifestile eziqinileyo eziphezulu. Amakristali eWristwatch kunye neentshukumo zokuhamba. Neefestile ezinqabileyo kakhulu zombane. Inje njengamacandelo e-insulating asemagqabini ekhetheke kakhulu-kwinjongo ombane ombuso.